Orinasa sy mpanamboatra Collagen Chicken Collagen | Yasin
Ny collagen Type II no collagen be indrindra hita amin'ny cartilage hyaline misy 80 hatramin'ny 90% amin'ny atiny collagen total. Ny collagen akoho II dia fantatra amin'ny anarana hoe collagen akoho type II ary nohafohezina hoe CCII. Collagen akoho karazana II mizara faritra antigenika mitovy amin'ny collagen olombelona karazana II. Ny valin'ny autoimmune amin'ny collagen type II dia heverina ho antony lehibe iray amin'ny pathogenesis an'ny arthritis rheumatoid.
Bika Aman 'endrika Color
Asehoy fanamiana fotsy na mavo maivana
Miaraka amin'ny fofona manokana an'ny vokatra
Fanamiana vovoka maina ankehitriny, tsy misy fery, tsy misy loto sy pentina mavomavo izay hitan'ny maso miboridana mivantana
Fametahana g / ml
Votoatin'ny hamandoana g / 100g
Votoatin'ny lavenona g / 100g
PH Value (vahaolana 1%)
Salanisan'ny lanjan'ny molekiola Dal
Metaly mavesatra Plumbum (Pb） mg / kg
Arsenika (As) mg / kg
Isan'ny bakteria tanteraka
≤50CFU / h
Tabilao mikoriana ho an'ny famokarana collagen akoho
Ny Chicken Collagen Type II dia nalaina avy tamin'ny Chicken Cartilage. Ny collagen Type II dia tsy mitovy amin'ny karazana I satria ny endriny voadio tanteraka.
Ny collagen akoho dia manankarena indrindra amin'ny collagen type II. Ny karazan-collagen karazana II dia nalaina avy tamin'ny resaka cartilage. Ny collagen akoho dia azo foronina ary hatao vahaolana tsindrona na famenony. Izy io koa dia azo alaina amin'ny ron-kena taolana akoho.
Ny collagen akoho dia matetika ampiasaina amin'ny famenony ho an'ny fahasalaman'ny taolana sy ny taolana, ary ny vokatra kosmetika hanampiana ny hamandoana sy ny fanalefahana ny hoditra. Izy io dia afaka manohana ireo sela mifandray, toy ny tendon-taolana sy ny ligamenta, ary manohana ny hozatra, ny taolana, ny hoditra ary ny rafi-pihetseham-po. † Ny collagen dia mety hanampy amin'ny fanamafisana ny tonon-taolana ary hampiroborobo kokoa ny hoditra amin'ny hoditra.
Manondrana fenitra, 20kgs / kitapo na 15kgs / kitapo, kitapo poly ao anatiny ary kitapo kraft ivelany.
Miaraka amin'ny paleta: 8MT miaraka amin'ny paleta ho an'ny 20FCL; 16MT miaraka amin'ny pallet ho an'ny 40FCL
Mandritra ny fitaterana, tsy azo atao ny mampiditra sy mihodina; tsy mitovy amin'ny zavatra simika toy ny menaka sy ny fiara misy poizina ary manitra.
Ataovy anaty kaontenera mihidy mafy sy mihidy.
Voatahiry amina faritra mangatsiaka sy maina ary misy rivotra.